Cali Mahdi - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Ali Mahdi Muhammad)
Madaxwaynihii 4aad ee Soomaliya
Janaayo, 1991 ilaa Juun, 1995
Xil kaga horeeyay:
Maxamed Siyaad Barre.
Xil kaga danbeeyay
Cabdi Qaasim salaad xasan.
Tuulada Cadowuul, Soomaaliya
Cali Mahdi Maxamed (carab:علي مهدي محمد) wuxuu ku dhashay tuuladacadowuul oo ka tirsa shabeelada dhexe ee magaala madaxda Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1938. Cali Mahdi wuxuu wax ku bartay iskoolaadkii Xamar ka jiray. Cali Mahdi 1959 ayaa Qaahira u aaday waxbarasho . Cali Mahdi wuxuu fursad u yeeshay in uu xubin ka noqdo baarlamaanka Somaaliya sanadkii 1969, asagoo noqday qofkii ugu dhalinyaraa ee xubin ka noqda baarlamaanka Soomaliyeed.
Sanadahii 80's Cali Mahdi iyo aqoonyahaano Soomaliyeed aya waxaa asaasay urur odoyaal ah "Manifesto" oo waraaq lagu codsanaayo in wax looga bedelo siyaasadda Soomaliyeed u diray madaxweeynihii wadanka ee markaas Maxamed Siyaad Barre.
Cali Mahdi sanadkii 2007 wuxuu abaabulay shir nabadeed belaha Somaaliyeed la isugu keenaayo . waxaa jiro waxyaabo badan oo wanaagsan oo u qabtay shacabka soomaaliyeed lama soo koobi karo .
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cali_Mahdi&oldid=204029"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 27 Luuliyo 2020, marka ee eheed 20:11.